VAVAKA HO FANAMBARANA OLOSAMBATRA AN’I LUCIEN BOTOVASAO NO SADY FANGATAHANA FAHASOAVANA - Fihirana Katolika Malagasy
Daty : 27/01/2015
Ry Andriamanitra Rainay ô, Ravo izahay Oloraiky fa nampahafantarinao
ny fitiavanao tamin'y alalan'i Jesoa Zanakao.
Vonjeo izahay vahoakanao ka mba ho sitrakao ny hampibaribary ny voninahitrao amin`ny fanambarana ny Mpanomponao
Lucien Botovasoa ho anisan`ireo Olontsambatra.
Tsy nisaraka tamin' izany koa ny fanajany lalina an`i Masina Maria.
Mba omeo anay, noho ny vavaka ataony izao fangatahana aminao izao:......
fangatahana aminao izao:...... (oh : ny fahasalamako)............
Matoky Anao izahay,Ry Ray satria Andriamanittra Fitiavana sy be famindrampo
Ianao ary mahefa ny zavatra rehetra.
Amin`ny alalan`i Kristy Zokinay sady Tomponay no angatahanay izany Amena
+ Izaho mino(simbolin`ny Apostoly)...
< Vavak'i Md. Ignace de Loyola
RY FO MASIN'i JESOA MIVAVAHA HO ANAY >
saolala - 28/01/2015 08:20
Io vavaka io dia atao ho fanambarana Olon-tsambatra an'i Lucien Botovasao sy fangatahana fahasoavana ka miangavy an'izay mahazo fahasoavana mba hampita izany amin'ity adiresy ambany ity.
+ Mgr Marc Benjamin RAMAROSON , c.m., Evekan’i Farafangana
Ampitao amin’i + Mgr Marc Benjamin,RAMAROSON c.m., B.P 24 (309) Farafangana
izay fahasoavana noraisinao. Misaotra
miarizo15 - 19/02/2015 11:05
katolika aho. fa mahagaga ahy ny ilatsika katolika olona hafa ho panelanelana @Andriamanitra nefa dia mazava ny baiboly hoe "izaho no lalana sy fahamarinana" hoy i kristy, ary hoy ny apostoly "tsy misy anarana hafa ambany ny lanitra hahazahoana famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesoa"
saolala - 22/02/2015 00:45
Tokona ny Mpanelanelana (médiateur) dia i Kristy nefa amin’ny Fianakaviana ny Eglizy dia miara-mivavaka amintsika ny olomasina amin’ny fangatahana fahasoavana. Tsy Mpanelanelana fa mpivavaka tahaka antsika. Noho izany tsy mivavaka aminy isika izany hoe atao mpanelanelana tsy amin’ny alalany na oviana na oviana fa amin’ny alalan’i Kristy irery ihany ny vavaka asandratra ataontsika. Fa ny fiombonana amin’ny Olomasina (jereo ny Credo) dia miaraka mivavaka amintsika ireo Olomasina. Mivavaka ho antsika Izy ireo manomboka amin’i Masina Maria....
saolala - 22/02/2015 00:47
tojosoft1 - 23/07/2015 17:49
fa maninona raha mba ampidirina koa ireo vavaka maro hafa sasany?